Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 05/12/2020)
The University of Rostock yenye kwiiyunivesithi isiJamani uluhlu olubanzi kakhulu zezifundo. It inikeza ngaphezu 100 izifundo: 34 gqiba ngesidanga, 56 nge isidanga yenkosi, 37 (kubandakanywa nootitshala) ngoviwo lukarhulumente, yaye 3 nge iPh.D. Ngaphezu, i-Centre for yoQeqesho looTitshala kunye noPhando Educational ntoni ukuqhuba kuphela uphando kwezemfundo kodwa isebenza ekuphuculeni umgangatho woqeqesho lootitshala.
Ufuna ukwazi indlela ukuya kwenye Uninzi Universities Okumangalisayo EYurophu? Nokuba yeyiphi na indlela wena ojikelezayo ukusuka (umzk. Rostock okanye Schwerin, EBerlin okanye Hamburg), ukuthatha uloliwe ude ufike kwisikhululo sikaloliwe Wismar. ukusuka apha, Unga kukhwela ibhasi ebhasini-stop ngokusebenzisa imigca e J.-R.-nguBhela-Strasse 4 okanye G (towards Ostseeblick) okanye B-D (towards Seebad Wendorf). It is a ehamba umzuzu omnye kuphela kulo bhasi-stop phesheya Indawo yokupaka ukuya Campus.